सिर्द्धार्थ तमु समाजको अध्यक्षमा श्रीमान
पोखरा, १० चैत। सिर्द्धार्थ तमु समाज पोखराको सातौ साधारण सभा एवं चौथो अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति गठन गरी शनिबार सम्पन्न भयो। अधिवेशनले श्रीमान गुरूङको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा गेसबहादुर गुरूङ, सचिवमा रोशन गुरूङ, सहसचिवमा धनबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्षमा सु. केहरसिंह गुरूङ चयन भएका छन्। त्यसैगरी सदस्यमा रामप्रसाद गुरूङ, बचनबहादुर गुरूङ, मोहनथापा गुरूङ, गीमाया गुरूङ, टंक… पुरा पढौ
नेष्टद्वारा पत्रकारसँग छलफल
पोखरा, १० चैत। सीप हस्तान्तरणद्वारा सशक्तिकरण (नेष्ट) ले संस्था दशौ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शनिबार छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। संस्थाले दश वर्षसम्ममा गरेका गतिविधि जानकारी दिने उद्देश्यले उक्त छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। नेष्ट नेपालका ७१ वटा जिल्लामा कृषि, पशुपालन, खानेपानी सरसफाई, वन वातवरण र समाजिक तथा संस्थागत विकासका लागि काम गर्दै आएको छ। दश वर्षको कार्याकालमा सचेतनाभन्दा पनि… पुरा पढौ
वटरफ्लाई फाउण्डेशन र सेवा अस्पतालद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
पोखरा, १० चैत। वटरफ्लाई फाउण्डेशन नेपाल कास्की र कास्की सेवा अस्पतालको आयोजनामा एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर शनिबार सम्पन्न भएको छ। शिविरमा सहयोगीहरुलाई निःशुल्क औषधीसमेत वितरण गरेको उक्त शिविरमा तीन सय ५५ विरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। कास्की सेवा अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक डा. पदमबहादुर खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरे, सामुदायिक सेवा केन्द्र बैदामका अध्यक्ष… पुरा पढौ
लिटिल लनर्स मन्टेश्वरीको प्रथम वाषिर्कोत्सव
पोखरा, १० चैत। लिटिल लनर्स मन्टेश्वरी, पोखरा-२ को प्रथम वाषिर्कोत्सव तथा अभिभावक दिवस शनिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कन्या क्याम्पस, नदीपुरका क्याम्पस प्रमुख सुरेन्द्र भारीले बालमैत्री शिक्षा प्रदान गर्न मन्टेसरी शिक्षाको महत्वपूर्ण स्थान हुने धारणा राखे। उनले शिक्षिकाहरुलाई तालिमको अवसर प्रदान गरी अझ परिकृतरुपमा मन्टेश्वरी सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।सो अवसरमा पिसजोन एकेडेमीका संस्थापक योगेन्द्र शर्मा दाहालले पनि बोलेका… पुरा पढौ
एकता इलेक्टि्रसियन एशोसिएसनद्वारा रक्तदान
पोखरा, १० चैत। एकता इलेक्टि्रसियन एशोसिएसनको आयोजनामा पोखराको बिरौटाचोकमा शनिबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा ५३ जनाले रक्तदान गरेका छन्। प्रमुख अतिथि राथि ग्रुपको प्रतिनिधि तथा न्यू आचार्य इलेक्ट्रोनिक्सका प्रवन्ध निर्देशक वालकृष्ण आचार्यले एशोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद ढकाललाई व्लडव्याग हस्तान्तरण गरि कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए। सो क्रममा बोल्दै आचार्यले रक्तदान नै महादान भएको हुँदा यस्ता कार्यक्रमहरु विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गर्नुपर्ने… पुरा पढौ
फुटपाथका व्यापारीले आन्दोलन गर्ने
पोखरा, १० चैत। पोखरा फुटपाथका व्यापारीहरुले प्रशासनले धरपकड गरी विस्थापन गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। एमाओवादी निकट राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ कास्कीले शनिबार दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म एक घण्टा चक्काजाम गर्‍यो। चक्काजामपछि पृथ्वीचोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै एमाओवादी कास्कीका सह-इञ्चार्ज रामजी बराल जीवनले कास्की प्रशासन दलहरु र नागरिक समाजलाई बाइपास गरेर अगाडि बढिरहेको बताएका थिए। उनले नयाँबजारमा… पुरा पढौ
क्रान्तिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सम्मेलनमा कुटाकुट
पोखरा, ९ चैत। एनेकपा माओवादीको भ्रातृ स·ठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) पृथ्वीनाराण क्याम्पस जिल्ला समितिको शुक्रबार आयोजित दोस्रो जिल्ला सम्मेलन विवाद र कुटाकुटबीच सम्पन्न भएको छ। पार्टीउपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरले ६१ सदस्यीय नयाँ कमिटी एकलौटी पारामा घोषणा गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधरको आरोप छ। उद्घाटन सत्रपछि नयाँ कमिटी प्रस्तावमा विवाद भएको थियो। विवादमा प्रचण्ड पक्षधरबाट अध्यक्षका प्रत्यासी मानिएका क्षितिज सापकोटा… पुरा पढौ